ထိုနတ်ဆိုးများ၏သခင် — ခရီးစဉ်လီ
ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျယရှေုအကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏လူအကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်သောအခါအတခါတရံတူညီအမျိုးအစားအတွက်စဉ်းစားသောအခါ. သူတို့ဟာဘုရားသခင်နှင့်မာရျနတျအကြားတစ်ဦးနတ်မင်းကြီးစစ်တိုက်အဖြစ်ဝဠာထင်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များနှင့်တူအားလုံး, ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရသူကိုကြည့်ရှုခြင်းငှါအဆုံးထားချက်အရင်. ယရှေုသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအနိုင်ပေးမြော်လင့်သောကောင်းသော့တစ်ဦးအေးဂျင့်ဖြစ်? ယရှေုသညျဇာတ်လမ်းထဲမှာပဲအခြားဇာတ်ကောင်ဖြစ်?
ကောင်းပြီမာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်ယရှေုသညျမကျြနှာကိုမှဆိုးသောမျက်နှာမှတပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြည့်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးပုံပြင်မှာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားတာပေါ့. ထိုအခါငါယေရှုနှင့်မကောင်းသောအမှု၏တပ်ဖွဲ့များအကြားသွားတဲ့စစ်တိုက်ရှိကွောငျးဆှေးနှေးမယ်လို့, ဒါပေမဲ့တကတရားမျှတရန်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး. မာကုဖို့လမ်းဖွင့်ရအောင် 5.
မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုအတွက်ဒီအချိန်လောက်မှာ, ယရှေုသညျဆုံးမဩဝါဒပေးခဲ့နဲ့ကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးစုရုံးနှင့်သူ၏ဆုံးမဩဝါဒကိုနားထောငျဖို့စတင်ခဲ့. ညအချိန်ရောက်သောအခါသူတို့တစ်လှေပေါ်တွင်တယ်ကွာရွက်လွှင်. ဤသည်မိုးသကျမုနျတိုငျးလာဘယ်မှာဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်, တပည့်ထိတ်လန့်, ယရှေုသညျသူ၏စကားနှင့်အတူလေကို calms, "ငွိမျးခမျြးရေး, ဆဲဖြစ်လိမ့်မည်။ "သူတို့သမုဒ္ဒရာအစွန်းရောက်အတိုက်အခံနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်နှငျ့ယရှေု၏စောင့်ရှောက်မှုယူခဲ့ကြသည်ဒါ. အဖြစ်မကြာမီသူတို့အခုသူတို့ကပိုအတိုက်အခံနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သည်ကြသည်အနားယူရန်စတင်အဖြစ်.
ရဲ့စာသားဖတ်စို့, ကျမ်းပိုဒ်မှာစတင် 1.
သူတို့ဟာပင်လယ်၏အခြားဘက်ခြမ်းဆီသို့ရောက် လာ. ,, အဂါဒရပွညျမှ. ယရှေုသညျလှေထဲကတိုးမြှင်ပြီးမှ, ချက်ချင်းညစ်ညူးသောစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူသင်္ချိုင်းထဲကလူတသူ့ကိုအဲဒီမှာတွေ့ဆုံခဲ့. သူကသင်္ချိုင်းကြားတွင်နေထိုင်ခဲ့. အဘယ်သူမျှမတော့ဘူးသူ့ကိုချည်နှောင်နိုင်, တစ်သံကွိုးနှငျ့ပင်မဟုတ်, သူမကြာခဏခြေချင်းများနှင့်ကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခဲ့ဘို့, ဒါပေမဲ့သူကင်းချည်နှောင် wrenched, သူကအပိုင်းပိုင်းအတွင်းခြေချင်းကိုဖဲ့. ဘယ်သူမှ… အစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့တယ်… သူ့ကိုတို့ကိုနှိမ့်. ထိုသင်္ချိုင်းကြားတွင်သူကအမြဲအော်ဟစ်နှင့်ကျောက်ခဲနှင့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖြတ်တောက်ခဲ့သည်တောင်ရိုးပေါ်မှာနေ့ညဉ့်. ထိုမင်းသည်အဝေးကသညျယရှေုကိုမွငျသောအခါ…, သူသည်ရှေ့တော်၌ပြေးပြပ်ဝပ်. ထိုအကျယ်သောအသံနှင့်အော်ဟစ်, ဟုသူကပြောသည်, "သင်သည်ငါနှင့်အတူအဘယျသို့ပွုရပါပွီ, ယရှေုသညျ, အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်? ငါသည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့ငှာ, ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲကြဘူး။ "ဟုသူကသူ့ကိုပြောနေခဲ့သည်များအတွက်, "လူထွက်လာကြ, သငျသညျညစျညူးသောဝိညာဉျတျော!"ယရှေုသညျသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်, "မင်းနာ​​မည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ?"သူကပြန်ဖြေ, "ငါ့နာမကို Legion ဖြစ်ပါသည်, ။ ကျွန်တော်တို့အများဖြစ်ကြ၏အတွက် "သူသည်ထိုတိုင်းပြည်ထဲကသူတို့ကိုစလှေတျဖို့မကြိုးစားသူ့ကိုတောင်းပန်. ယခုဝက်မှာများစွာသောဝက်အစုသည်ထိုတောင်စောင်းပေါ်ရှိအစာကျွေးခဲ့သည်, သူတို့သညျမတောင်းပန်, ဟုဆို, "ဝက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို Send; ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုဝင်ရောက်ကြကုန်အံ့။ "ဟုသူကသူတို့ကိုခွင့်ပြုချက် ပေး. ဒါ. ထိုညစ်ညူးသောနတ်ထွက်လာသ, နှင့်ဝက်သို့ဝင်, နှင့်နွား, အကြောင်းနှစ်ထောင်အရအေတှကျ, ပင်လယ်ထဲသို့မတ်စောက်သောဘဏ်ဟုန်တည်းပြေးဆင်းနှင့်ပင်လယ်၌ရေနစ်ခဲ့ကြ. အဆိုပါကြောငျးထိုမွို့၌၎င်းနိုင်ငံအတွင်းပြေးတင်းပြော. ထိုအခါလူများကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါပဲအဘယ်အရာကိုမြင်ဆီသို့ရောက် လာ. ,. ထိုသူတို့သညျယရှေုသညျ လာ. နှင့်နတ်ဆိုးစွဲသောသူသည်ကိုမြင်လျှင်, အ Legion ခဲ့ဖူးသောသူတ, ထိုအရပ်၌ထိုင်လျက်, အဝတ်ကိုဝတ်နှင့်သူ၏လက်ျာစိတျထဲမှာ…, ထိုသူတို့သညျကွောကျရှံ့ခဲ့ကြ. ထိုသို့နတ်ဆိုးစွဲသောသူသည်ရန်နှင့်ဝက်ဖို့ဖွစျခဲ့ပွီးဘယျအရာကသူတို့ကိုမှဖော်ပြခဲ့မြင်ဘူးသောသူတို့အ. ထိုသူတို့ကသူတို့၏ဒေသကနေထွက်သွားဖို့ယရှေုတောင်းပန်ပါ၏မှစတင်ခဲ့. သူလှေထဲသို့ရတဲ့ခဲ့သည့်အတိုင်း, နတ်ဆိုးတို့နှင့်သိမ်းယူခဲ့သောသူသည်မိမိလုပ်နှင့်အတူရှိစေခြင်းငှါသူ့ကိုတောင်းပန်. ထိုမင်းသည်သူ့ကိုခွင့်ပြုပေမယ့်သူ့ကိုမှပြောကြားခဲ့သည်ဘူး, "အိမ်သင်၏မိတ်ဆွေများသွားပြီးထာဝရဘုရားသည်သင့်အဘို့ပြုတော်မူပြီဘယ်လောက်သူတို့ကိုပြောပြ, နှင့်မည်သို့မူ။ သငျသညျကိုသနားရှိခဲ့ပါတယ် "ထိုအခါသူသညျသှားနှငျ့ယရှေုကိုသူ့အဘို့ပြုသမျှမည်မျှဒေကာပေါလိကြော်ငြာစတင်, လူတိုင်းအံ့ဩ. (အမှတ် 5:1-20 တော်မူ၏)
ငါ. ယရှေုသညျ Demon က Man သိမ်းယူရင်ဆိုင် (5:1-6)
ဒါအဖြစ်မကြာမီသူတို့ညစ်ညူးသောစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူဤလူအားဖြင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်လှေထဲကခြေလှမ်းအဖြစ်. မစင်ကြယ်သောဝိညာဉျတျောအခြေခံအားဖြင့်နတ်ဆိုးဟုဆိုရုံနောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သူကိုဤသူသည်နတ်ဆိုးစွဲသဖြင့်သိမ်းယူခဲ့သည်. စာသားသူ့ကိုပေးသည်ဖော်ပြချက် chilling ဖြစ်ပါတယ်.
သူကအသေအကြားနေထိုင်ခဲ့. သူကအသေများ၏ကုမ္ပဏီကြိုက်နှစ်သက်သည်, အသက်ရှင်သောကုမ္ပဏီအဖို့. သူကလူစွမ်းကောင်းတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိရှိခဲ့တယ်, အဘယ်သူမျှမချည်နှောင်သူ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်အများကြီး. သူကပဲသူတို့ကိုဖဲ့. သူကအမြဲအော်ဟစ်နှင့်အော်ဟစ်ခဲ့သည်. သူဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုမိမိထိခိုကျခဲ့, မိမိကိုမိမိရိုက်နှက်, မိမိကိုမိမိဖြတ်တောက်. ဤသူသည်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်.
ငါတို့သသောနေ့၌နတ်ဆိုးညှဉ်းဆဲခြင်း၏ဒီလိုမျိုးစိတ်ကူးသည်မျိုးခက်ပါတယ်. တစ်, ကျွန်တော်တို့ကိုအများတို့သည်လည်းထိုသဘာဝလွန်ယုံကြည်သောရပ်တန့်ကြပြီ. ထိုအခါဒုတိယအ, ကျွန်တော်တို့အများစုကလူတစ်ဦးအတွက်နတ်ဆိုးညှဉ်းဆဲမြင်ကြပြီမဟုတ်သောကြောင့်,. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တစ်ဦးတစ်မိနစ်အဘို့ငါနှင့်အတူသင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြုချင်တယ်.
ကြှနျုပျတို့သညျဤလူကိုမွငျလြှငျမယျဆိုရငျဘယျသို့ပွုမယ်လို့? သငျသညျတစျနေ့ကအိမ်မှာကားမောင်းနှင့်သင်္ချိုင်းတွင်နေထိုင်သောညီအစ်ကိုတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်နေ, နာကျင်မှုနဲ့ဝမ်းနည်းအော်ဟစ်. ငါသိ. ငါသူ့ကိုဖွင့်ခုတ်ဖြတ်သော်လည်းရန်အခွင့်အာဏာအချို့ကိုမျိုးကိုခေါ်ဆိုခြင်းခံရချင်ပါတယ်. ငါတို့သည်သူ့ကိုအ institutionalize မယ်လို့. သူကသူ့ကိုယ်သူရန်နှင့်အခြားသူများအားအန္တရာယ်ရဲ့သူသည်မိမိလက်ျာစိတျထဲမှာမင့်. သူကအကူအညီလိုအပျ. ကောင်းပြီဂါဒရပွညျရှိလူသူနှင့်အတူဘာလုပ်ရမှန်းမသိခဲ့ပါ. သူတို့ကသူ့ကိုတက်ချုပ်ထားရန်ကြိုးစားခဲ့, ဒါပေမဲ့ဒါဟာအလုပ်မပြုခဲ့. ငါသူတို့သည်ငါတို့သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်၏ကြောက်လန်ခဲ့ကြသည်သေချာပါတယ်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလ၌ဤကဲ့သို့သောလူရှိပါတယ်, အဘယ်သူသည်စာသားသူ့ကိုတူညှဉျးဆဲခံရ. မိမိတို့ခေါင်းပေါ်အတွက်စကားသံများနှင့်အတူ, အကြမ်းဖက်လိုတဲ့သဘောထားကို, အဘယ်သူသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုခုတ်ဖြတ်. ကျနော်တို့မျှသာရူးသို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါကြောင့်ခွဲခြား, ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများအပြားအတွက်သေချာပါတယ်, အားလုံးမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမဲ့အဲဒီရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများအပြားကနတ်ဆိုးဖိနှိပ်မှုဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါဇာတ်လမ်းအတွက်မြို့ရွာကလူဆင်တူ, ငါတို့သည်သူတို့တို့ကိုနှိမ့်ဖို့ကြိုးစားထက်အခြားသူတို့နှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိနှင့်မိမိတို့ကိုယ်နှင့်အခြားသူများနာကျင်မှသူတို့ကိုစောင့်ကြပါဘူး. ကျနော်တို့အခုလုပ်ဖို့ပိုမိုအဆင့်မြင့်နည်းလမ်းများရှိ. ကျနော်တို့တုံးမြို့ရိုး, ဆေးဝါးများနှင့်အတူအခန်းပေါင်းနှင့်အတူအဖွဲ့အစည်းများနှင့် psyche ရပ်ကွက်များ.
မိမိအ Crazy များအတွက်အကြောင်းမရှိစိတ်ကိုမိမိပြည်နယ်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားကြောင်းပဲအချို့သောစိတ်ဒဏ်ရာထက်ပို. ဆိုးယုတ်သောဝိညာဉျရေးရာတပ်ဖွဲ့များသည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုလွှဲပြောင်းယူကြပြီးသူ့ကိုနှိပ်စက်ကြသည်! သူကဤကဲ့သို့သောနေထိုင်သောကြိုက်နှစ်သက်မပါဘူး. သူကညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရဖြစ်ပါတယ်. သူကဖမ်းမိသည်, အကျဉ်းသားကျင်းပခံရ, အလိုတော်ဆန့်ကျင်နှိပ်စက်.
ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေလှည့်ဖြားခြင်းကိုမပြုကြနှင့်. နတ်ဆိုးများကိုမှန်ကန်များမှာ. သူတို့ကဝိညာဉ်ရေးရာသတ္တဝါတွေပါပဲ. သူတို့ကမကောင်းသောအနေနှင့်သူတို့သည်ဘုရားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆန့်ကျင်အလုပ်လုပ်. မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုခုနှစ်တွင်, ယရှေုသညျနတျဆိုးအတူ Run-ins တွေအများကြီးရှိပါတယ်. သူကအခနျးမှာအလွန်ဆင်တူအဖြစ်အပျက်ရှိပါတယ် 1. ထိုအခါခရစ်ဝင်ကျမ်းနတ်ဆိုးများအတွက်အချိန်အများစုကိုကလူကိုဖိနှိပျနှငျ့ဘုရားသခငျရဲ့ဖန်တီးမှုကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်. ဒီအထူးသဖြင့်လူနှငျ့အတူ, သူတို့ကသူ့ကို dehumanizing နေကြတယ်. သူတို့ကကိုယ်တော်၌ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်. နတ်ဆိုးများသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ညျဘုရားသခငျ၏ရည်ရွယ်ချက်များ undo နှင့်ဆီးတားရန်ရှာခြင်းငှါ. တဖန်ဘုရားသခင်ရှိပါတယ်, သူ့ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာအတွက်, ဤဆိုးညစ်သောတပ်ဖွဲ့များအလုပ်မှာဖြစ်ခွင့်ပြု.
နတ်ဆိုးများ '' အလုပ်သော်လည်းအပိုင်နှင့်ညှဉ်းဆဲခြင်း၏ဒီလိုမျိုးတူပေမသာ. အမှန်တကယ်, ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူ indwelled ယုံကြည်သူများသိမ်းယူမရနိုင်. သို့တိုင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အလုပ်မှာ. သူတို့ကအပြစ်တရားမှကျွန်တော်တို့ကိုသှေးဆောငျ. သူတို့ကအယူမှားသှနျသငျပြန့်နှံ့. တွင် 1 တိမောသေ 4, ပေါလုကနတ်ဆိုးများ၏ဒေသနာဆုံးမဩဝါဒပေးအယူမှားကိုခေါ်.
နတ်ဆိုးများကမ်ဘာ​​ပျေါမှာမကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးအများကြီးတာဝန်ရှိသည်. ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှလိုက်လျောဘယ်မှာ၏သင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့ဆဲတာဝန်ယူနေ. ထိုသူတို့သညျအသကျရှငျသညျဘုရားသခငျ၏ရန်သူဖြစ်ကြ၏.
Back ကိုလူအား. ဒီတော့နတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များပယ်ကိုတိုက်လွန်းအားကြီးသော. အဘယ်သူမျှမကသူ့ကိုမကယ်မလွှတ်နိုင်ခဲ့. သူကအဖြစ်ဝေးကလူကနေတတ်နိုင်သမျှသင်္ချိုင်းထဲမှာဖြစ်ရဲ့. သူအကွာအဝေးယရှေုကိုပယ်ကိုမြင်သောအခါဒါပေမဲ့သူထံတော်ပြေးများနှင့်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ချကျရောက်.
နတ်ဆိုးဤသူသည်တဆင့်စကားပြောဆိုနေသောကြောင့်ဤကျမ်းပိုဒ်ကဒီမှာစားမှုအနည်းငယ်ရရှိသွားတဲ့, ငါမူကားစာသားသူသညျယရှေုပြေးရသောအခါလူကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ထင်. သူသညျယရှေုကိုမွငျ, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယရှေုသညျညှဉျးဆဲသောထိုနတျဆိုးအကြောင်းတစ်ခုခုလုပ်နိုငျကွောငျးကိုသိ. ဒီတစ်ခါလည်းယရှေုသညျညှဉျးဆဲခွငျးထဲကနေသူ့ကိုလွတ်မြောက်နိုင်. သူကအခွင့်အလမ်းမှာကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြေး၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင်.
ကျနော်တို့ဒီမှာနတ်ဆိုးစွဲသောသူသည်အထဲကအရာတစ်ခုခုသင်ယူနိုင်. သူကမသိခဲ့ပါ ဘယ်လိုလဲ မည်သူမဆိုသူ့ကိုကယ်မလွှတ်နိုင်, ဒါပေမဲ့တစ်နည်းနည်းနဲ့သူသိသည် အဘယ်သူသည် သူ့ကိုကယ်မလွှတ်နိုင်. ကျွန်တော်တို့ကိုတချို့ကကြေကွဲ၏ဤတူညီသောအချက်ထံသို့လာရန်လိုအပ်ပါတယ်, ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်သမျှယေရှုအား run သည်အဘယ်မှာရှိ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုတော်အာဏာရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံမှ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေများနှင့်ကျွန်တော်သညျယရှေုကို run ရန်လိုအပ်ပါတယ်! ယရှေုသညျဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, "ငါ့ကိုရန်သင့်အားငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်ဆောင်သောလေးလံသောနေသောသူအပေါင်းတို့ကို လာ., ငါသည်သင်သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်သည်အခမျြးသာပေးလိမ့်မည်။ " ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိကြပါဘူး, ငါတို့မူကားထိုသို့ပြုနိုင်သောသူသိ.
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်နေသောရှေးရှေးနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျအခါအလားတူင်. သူတို့ကို stigmatize မနေပါနဲ့, သူတို့ကိုမုန်းကြ, သူတို့ကိုကဲ့ရဲ့သူတို့နှင့်ပြုံးရယ်. ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုသနားသင့်ပါတယ်. အရာအားလုံးထက်ထက်ပို, သူတို့ကိုအပ်ခံရဖို့လိုအပ်. ကျနော်တို့ဘက်စုံသူတို့ကိုဝတ်ပြုရမည်, လိုအပ်ပါကဆေးဝါးကိုအသုံး, ဒါပေမဲ့လှတျမွောကျခွငျးအဘို့အယရှေုသညျသူတို့ကိုထောက်ပြ. ထိုအခါသူတို့ကိုကိုယ်တော်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အဘို့ဆုတောင်းကြလော့. ထိုသူတို့သည်သခင်ဘုရားနှင့်အတူတှေ့ဆုံလိုအပ်ပါတယ်. ဆေးဝါးကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ့်ချနိုင်, နှင့်အကြံပေးခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သာသညျယရှေုကျွန်တော်တို့ကိုမြေတပြင်လုံးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်.
II ကို. အဆိုပါနတ်ဆိုးများအားဆင့်ဆိုရမည်မှာ (5:7-13)
အဖြစ်မကြာမီထိုလူသညျယရှေုရှေ့တော်၌ကျရောက်မူသည်အတိုင်းအော်ဟစ်, "သင်သည်ငါနှင့်အတူယေရှုဘာလုပ်ဖို့ပြီ, အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်? ငါသည်ဘုရားသခင်အားဖြင့်သင်တို့ငှာ, ငါ့ကိုညှဉ်းဆဲကြဘူး!" စာသားသညျယရှေုတကားဟုကြောင့်သူကအော်ဟစ်ကပြောပါတယ်, "သူ့ကိုထဲကသင်တို့၌မစင်ကြယ်ဝိညာဉျကို လာ. ကွ။ " ဒီစကားပြောသူ့ကို၏အတွင်းမစင်ကြယ်သောဝိညာဉျတျောဖွစျကွောငျးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသထားတယ်.
ယခုငါတို့ပြီးသားယေရှုနှင့်နတ်ဆိုးတူညီဘက်မှာမဖြစ်ကြောင်းကိုထူထေ​​ာင်မယ့်. ယရှေုသညျဘုရားသခငျနှငျ့နတျဆိုး၏သားတျောသညျဘုရားသခငျရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆန့်ကျင်နေကြသည်. ဒီတော့ရှုထောင့်သို့ဤကိုတင်ဖို့ကြိုးစားကြကုန်အံ့.
ဒါကစစ်ပွဲအတွင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့. ထိုအဖွင့်တဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အချို့ POWs နှင့်အမေရိကန်တပ်များသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းငှါကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်အကျဉ်းထောင်အစောင့်ဟုပြောဆိုကြပါစို့, "Ah ကအမေရိကန်ကြည်းတပ်? သင်သည်ဤအရပ်၌အကျင့်ကိုကျင့်သောအရာကိုလူသည်? သင်ရုံအကြှနျုပျတို့အရာကျေးဇူးပြုပြီးပြုစေနိုင်သလား? ကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်စေပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီး!"အဲဒီအရူးမဖွစျပါ့? ဒါဟာတူရဲ့, "ဒီစစ်ပွဲသည်မဟုတ်? သငျသညျတိုက်ခိုက်နေမယ့်အစားတောင်းစားမဖြစ်သင့်?"ဒါပေမယ့်ဒီပုံမှန်စစ်မဟုတျကွောငျးကိုဖျောပွ. ဒီစစ်တိုက် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုရှိတယ်.
နတ်ဆိုးသည်ဤသူတို့ရှေ့မှာရပ်နေသူကိုမေးရန်မလိုပါ. အဖြစ်မကြာမီသူ့ကိုမြင်သည်အတိုင်းသူတို့အထံတော်သညျယရှေုဖြစ်အသိအမှတ်မပြု. သူတို့ဟာသူကဆို ယရှေုသညျ, အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်. သူတို့ကပဲနာမဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုမခေါ်ကြဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့အဆင့်အတန်းကိုအသိအမှတ်မပြု.
ဤသည်အမှန်တကယ်မဿဲအတွက်ပေတရု၏ဝန်ခံတူသောတွေအများကြီးအသံ 16 ယေရှုက "ကြောင်းခရစျတျော, အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားအ။ " နတ်ဆိုးကအမှန်တကယ်ပဲဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားကိုဟစျကျွောကွ. ထိုသူတို့ townspeople ထက်သောထာဝရအမှုအရာသို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူအပေါငျးတို့သ. သူတို့သိတယ်. သေး, သူတို့သူပုန်.
ဘယ်ငါကိုကွောကျစရာကောငျးမှနျတရားကိုဖျောပွသညျထင်. ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ, သငျသညျယရှေုသညျသူသည်သိနိုငျ, ယရှေုသညျမသိဘဲ. သငျသညျထိပ်သီးအစည်းအဝေးဘုရားကျောင်းသည်တနင်္ဂနွေလာစေခြင်းငှါ,. သငျသညျကျမ်းစာသင်ကျောင်းရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျတိုင်း Podcast တခုကိုစကားကိုနားထောငျသောဘာသာရေးစာအုပ်ဖတ်စေခြင်းငှါ,. သငျသညျယရှေုဟုအဘယ်သူဆိုနိုင်သောကြောင့်, သို့သော်မယူဆကြဘူး, သငျသညျအထံတော် KNOW က.
ကိုယ်တော်သိမှတ်ကြလော့နက်ရ​​ှိုင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို - အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့နှင့်မေတ္တာရှင်များနှင့်နက်သောအဆင့်မှာယုံကြည်ကိုးစား. ကိုယ်တော်အကြောင်းကိုသိမှတ်ကြလော့အချက်အလက်များကျက်မှတ်ထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏. အချက်အလက်များကျက်မှတ်သညျဘုရားသခငျလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီအဘယျသို့မဟုတ်. တဖန်ဘုရားသခင်ကသင့်ရဲ့စာအုပ် SMART နှင့်အတူသဘောကျမဟုတ်ပါဘူး. သငျသညျစစ်မှန်တဲ့အမှုအရာဆိုနိုင်? မင်းအတွက်ကောင်းတယ်; ဒါကြောင့်နတ်ဆိုးများနိုင်.
ဂျိမ်း 2:19 ကပြောပါတယ်, "သင်ဘုရားသခင်တဆူတည်းကယုံကြည်; သငျသညျကောင်းသောအမှုကိုပြု. တောင်မှနတ်ဆိုးယုံကြည်-နှင့်တုန်ခါလာသည်!" ဘုရားသခငျသညျသငျ၏အသိပညာတစ်ခုပြောင်းလဲဘဝမှဦးဆောင်မမူခဲ့လျှင်, သငျသညျနတျဆိုးထက်မကောင်း၏. စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပြသ.
သူကပြောပါတယ်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုနှင့်အဘယ်သို့ပြုရမည်ပြီ? အများအားဖြင့်, အဘယ်ကြောင့်သင်ဒီမှာရှိပါတယ်? တယောက်တည်းကျွန်တော်တို့ကို Leave! သူတို့သညျယရှေုကိုသိရ, အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုဆောင်ကြဉ်းလာ. သူတို့ကယရှေုသညျဘေးဥပဒ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူပယ်ပြုပါရန်နှင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်ဖြစ်စေခြင်းငှါရေ​​ာက်လာပြီသိ. သူတို့ဟာသူတို့ဖျက်ဆီးခြင်းများပါဝင်သည်ကိုသိ. သူတို့ကအဆုံး၌ဖကျြဆီးခံရလိမျ့မညျနှငျ့ယရှေုခရစျသစိုးစံလိမ့်မည်ဟုသိ.
သူတို့ကသူတို့နာ Legion ကြောင်းပြောပါ. ဤသည်ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုရှိပါတယ်ကွောငျးဖျောပွဖို့ရည်ရွယ်သည်. ရောမမွို့ရှိတစ်ဦး Legion ငါးထောင်ခြောက်မှစစ်သားခဲ့သည်. လည်း, ကျွန်တော်သူတို့ဘယ်လောက်အားကြီးသောမြင်. ကျနော်တို့အနည်းဆုံးပြောနေတာင် 5,000 နတ်ဆိုးများ. သေး, သူတို့မသနားတျောမူဘို့စောင့်တော်မူ.
သငျသညျအစဉျအမွဲကြီးမားတဲ့ဂိမ်းစကားပြောနှင့်စက်ဝိုင်းထဲမှာပတ်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်ပေမယ့်သူတို့ကိုသင်ရန်ပွဲကိုမမြင်ရသူကို dudes မြင်ကြပြီ? သူတို့အနိုင်ရဖို့အတွက်လုံးဝအခွင့်အလမ်းရှိလာတဲ့အခါလူတွေဟာများသောအားဖြင့်သိ. ဒါကကျနော်တို့ကဒီမှာကြည့်ပါကားအဘယ်သို့. အဘယျသို့ငါတို့မြင်တစ်ဦးအားနည်း, သနားခြင်းကရုဏာအဘို့တောင်းစားရှုံးနိမ့်သောရန်သူတည်းဟူသော.
သူတို့ကမိမိအခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်ရှိသည်သဘောပေါက်. သင်သည်သင်၏တန်းတူထံမှခွင့်ပြုချက်တောင်းခံကြပါဘူး. ကမျြးစာကိုမကောင်းသောအတပ်ဖွဲ့များတစ်လျှောက်လုံးအားလုံးဘာမှမအတှကျဘုရားသခငျရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်. ယောဘ၏ပုံပြင်ကိုစဉျးစား. စာတန်ကယောဘကိုထိဖို့ဘုရားသခငျရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်သာဘုရားသခငျသညျအခွင့်လိမ့်မည်သလောက်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြု.
သူတို့ဟာယေရှု၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဘယ်နေရာမှာမဆိုသွားသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှမပွုနိုငျ. သငျသညျဘုရားသခငျသညျသူတို့ကိုထိန်းချုပ်ဘူးလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဘယျသို့စိတ်ကူးနိုင်သလား? သူတို့ကသူတို့လမ်းခဲ့ အကယ်. သူတို့ကဤသူသည်လိုသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအပေါငျးတို့သညှဉ်းဆဲလိမ့်မယ်. သို့ရာတွင်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုခွင့်ပြုမထားဘူးကျွန်တော်တို့လည်းများအတွက်ကိုယ်တော်ကိုချီးမွမ်းရသင့်တယ်.
သူ့ကိုသောအားဖြင့်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူနှင့်မြေကြီးပေါ်, မြင်နိုင်နှင့်မမြင်နိုင်သော, ရာဇပလ္လင်ဖြစ်စေ, အစိုးရသို့မဟုတ်အစိုးရသောမင်းတို့သို့မဟုတ်အာဏာပိုင်များအမှုအရာသူ့ကိုမှတဆင့်နဲ့သူ့အဘို့ဖန်ဆင်း -all ရှိမရှိ. (ကောလောသဲ 1:16 တော်မူ၏)
ဤရွေ့ကားနတျဆိုးသညျယရှေုတဆင့်နှင့်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ခဲ့သည်. သူတို့ကသူပုန်များဖြစ်ကြ, သို့သော်ကိုယ်တော်တိုင်ချွတ်ပြသနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့ကြီးကျယ်သောအစီအစဉ်တွင် pawn အဖြစ်အသုံးပြုကြသည်.
ခရစ်တော်၏စကားလုံးများ၏အာဏာကိုဤနေရာတွင် display ကိုအပေါ်တကယ်ဖြစ်ပါသည်. ရုံငြိမ်းချမ်းရေးဆု "နဲ့ရှေ့တော်၌ထိုမြင်ကွင်းတစ်ခုတူ, ဆဲဖြစ်လိမ့်မည်။ "ကျနော်တို့ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၏အခ​​ွင့်အာဏာကိုတွေ့မြင်. ယရှေုသညျဘုရားသခငျသညျနှငျ့သူပြောသောနှင့်ပညတ်တော်မူ၏သောအခါအမှုကိုပြုရပါမည်. သူကမမေးပါဘူး, သူကပညတ်တော်မူ၏. ယေရှု၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအပြင်းထန်ဆုံးအမြောက်တပ်ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်သည်. ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်အစွမ်းထက်သည်! ဒါဟာအတူတကွစကြဝဠာရရှိထားသူ!
ဒီရှေ့တော်၌ထိုဇာတ်လမ်းထဲမှာသူကဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျော်ကသူ့ Lordship ပြသ. ထိုနောက်မှဇာတ်လမ်းသူဟာအနာရောဂါကူးသူ၏ Lordship ပြသထားတယ်. ယရှေုသညျအပေါင်းတို့၏သခင်ဘုရားသည်. ထိုကရုဏာကယ်တင်တတ်၏.
ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ, ယရှေုသညျအမှနျတကယျရှင်များ ဟူ. ၏သခင်ကြောင်းကုမ္ပဏီခံယူချက်နှင့်အတူယုံကြည်ရန်ရှိသည်. ကမျြးစာကိုလုံးဝဘာမျှမကသညျယရှေုခရစျ၏အခွင့်အာဏာအောက်တွင်မဟုတ်ပါဘူးတည်ရှိရှိကွောငျးသှနျသ. အဘယ်သူမျှမသစ်ပင်တပင်ရှိပါတယ်, အသံမ, အဘယ်သူမျှမအင်းဆက်ပိုးမွှား, အဘယ်သူမျှမတိရိစ္ဆာန်, အဘယ်သူမျှမဘုရားမဲ့ဝါဒီ, အဘယ်သူမျှမကမွတ်စလင်, အဘယ်သူမျှမဟိန္ဒူ, အဘယ်သူမျှမကောငျးကငျတမနျ, အဘယ်သူမျှမနတ်ဆိုး, ယုတ်ညံ့ခြင်းနှင့်ယေရှု၏အခွင့်အာဏာသည်ခရစ်တော်အောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမမာရ်နတ်. ဘုရားသခင်ဟာအချိန်များအတွက်ပုန်ကန်မှုခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ, သူကသူတို့ကိုခဏခွဲသူ၏ lordship မှအပေါ်ကိုသွားခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ, သို့သော်ယေရှုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအသစ်ဖြစ်စေမည်ဟုနှင့်သူ၏ခြေအောက်၌ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့မည်.
III ကို. ယရှေုသညျလူသားကယျတငျ (5:14-20)
လူအသူ့ကိုမြင်သောအခါသူအဝတ်ကိုဝတ်ထိုင်နှင့်သူ၏လက်ျာစိတျထဲမှာခဲ့သည်. ခဏမှာတော့အရာအားလုံးပြောင်းလဲသွားတယ်. သူတို့ကသူသည်ကိုယ်တိုင် bruising နှင့်အစဉ်မပြတ်အော်ဟစ်ခဲ့သည်သူ့ကိုမြင်နောက်ဆုံးအချိန်. ယခုသူသည်သင်တို့ကိုငါ့အဖြစ်ပုံမှန်ခဲ့သည်.
ကရုဏာတော်အားဖြင့်သညျယရှေုကိုဤလူပွနျလညျထူထောငျ. ယရှေုသညျဒါကြောင့်အပြစ်တရားနှင့်သေခြင်းအားဖြင့်မရရှိသေးကြောင်းသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကို restore ရန်ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူပြီ. သူကခမည်းတော်ထံသို့ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပွနျလညျသငျ့မွဖြစ်ပါတယ်.
ထိုအခါသူသည်ဤလူအပေါင်းတို့အားသနားခြင်းကရုဏာပြကိုယ်တော်ကယ်တင်တတ်၏. ဤသူသည်, သူကညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရသော်လည်း, သင်နှင့်ငါကဲ့သို့သောအပြစ်သားခဲ့. သူကကယ်နှုတ်ခံရဖို့ထိုက်ဘူး.
သို့သော်သခင်ယေရှုသငျသညျအဘယျသို့ထိုက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးမကယ်မနှုတ်ပါဘူး. သင်ကဝင်ငွေရန်အဘို့အသူကရုဏာပြုမူမီကသူမစောင့်ပါဘူး. ယရှေုသညျသနားသောကွောငျ့ယရှေုသညျသနားသည်. သူဟာမေတ္တာရှင်နှင့်သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကိုဂရုစိုကျဖြစ်ပါတယ်.
အဘယ်သူမျှမဝိညာဉ်ရေးရာဖြစ်လျက်ရှိဒါခိုင်ရှိပါသည်, အပြစ်မရှိဒါခိုင်, ယေရှု၏အာဏာနှင့်အခွင့်အာဏာထက်ကဘာမှမ. ဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံးထံတော်ဘာသာရပ်သောကြောင့်,. ထိုအခါသူကကယ်နှုတ်ပါဘူးအခါ,, သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်သနားခြင်းကရုဏာအထဲကမ, ကြင်နာမှု, နှင့်ကျေးဇူးတော်.
ယရှေုသညျလုံးဝဘာမှမှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်မနှုတ်နိုင်: မပါဘဲ, စှဲမွဲမှု, စိတ်ကျရောဂါ, နာခြင်း, အလွဲသုံးစားမှု, မကောင်းတဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြား, ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါသမျှ. ယေရှုသည်သင်၏ရောဂါကိုငြိမ်းစေသောနှင့်သင့်ကိုကယ်နှုတ်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကူကယ်ရာမဲ့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာခရစ်တော်၏ပေးပို့အာဏာကိုမြင်.
IV. ပြည်သူ့တုံ့ပြန် (5:17-20)
ထိုနတျဆိုးစှဲယေရှုနှင့်အတူတစ်တှေ့ဆုံခဲ့မသာ, ဒါပေမယ့်တမြို့လုံးရှိပါတယ်. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာမြေတပြင်လုံးအဖြစ်အပျက်မျက်မြင်, နှင့်အခြားသူများကအကြောင်းကိုကြားသိ. ဘယ်လိုလူတိုင်းယေရှုနှင့်အတူသူတို့၏တှေ့ဆုံတုံ့ပြန်ပါဘူး?
အဆိုပါ townspeople ကြောက်ရွံ့ကြ! သူတို့ကဒီလိုအာဏာနှင့်အခွင့်အာဏာကိုတှေ့မွငျဖူး. ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ဝက်အကမ်းပါးပယ်သို့ပွေးလေ၏ကြောင့်အမျက်ထွက်နေ. သူတို့ကသူ့ကိုတုံ့ပြန်ရန်မည်သို့မသိခဲ့ပါ! သူတို့ကအမှန်တကယ်ထားခဲ့ဖို့သူ့ကိုတောင်းပန်ပါ၏!
လူအတော်များများဟာယနေ့သညျယရှေုကိုကြိုက်ကြဘူး. သူကသူတို့ရဲ့ဘဝသာမန်ပုံစံနှောင့်အယှက်. ယရှေုသညျလူမသက်မသာဖြစ်စေလေ့. တစ်ဦး box ထဲမှာ Little က comfy ယရှေုသညျမတည်ရှိပါဘူး. သငျသညျကိုယျတျောအဘို့အရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုဘဝရှာဖွေနေစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်. သူကအမှုအရာထချောက်ချား. သူသည်မှောင်မိုက် demolishes နှင့်အလင်းထဲသို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆို.
ယခင်နတျဆိုးစှဲကျေးဇူးနှင့်အတူတုံ့ပြန်. သူကသူနှင့်အတူဖြစ်ယေရှုနဲ့အသနားခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုလား. ယရှေုသညျနေဖို့နဲ့တခြားသူတွေကိုပြောပြဖို့သူ့ကိုကိုပြောတယ်. သူကသူ့ကိုနားထောင်သောသူ. ဤသည်ယေရှုနှင့်အတူတစ်တှေ့ဆုံဖို့လက်ျာတုန့်ပြန်ဖြစ်ပါသည်.
နောက်ဆုံးသောကာလသင်ထာဝရဘုရားသည်သင့်အဘို့ပြုတော်မူပြီအဘယျသို့အခြားသူများကိုကြားပြောလေ၏သောအခါ,? သူကမှသင့်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏ရဲ့အဘယျသို့? နတ်ဆိုးအပိုင်တူသိသိသာသာဖြစ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ်. တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အပြစ်တရားရုန်းကန်မှလှတျမွောကျခွငျးဖွစျနိုငျ. သွေးဆောင်မှုကိုကျော်လွှားနိုင်. အနာရောဂါမှငြိမ်းစေလျက်နိုင်. သို့မဟုတ်ပဲသူကသင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ရဲ့ပုံကိုတခြားသူတွေကိုပြောပြ. အခြားသူများကိုပြောပြပါ!
ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအာဏာကိုသက်သေခံရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်ကြောင်းဤနေရာတွင်ကြည့်ရှု, ကြေးဇူး, ယေရှု၏အခွင့်အာဏာနှင့်ပဲတပည့်မဖြစ်ဖို့. တချို့ကစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အတူတုံ့ပွနျကွ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုနှင့်အတူအခြားသူများကို, ရုံမျှသာလက်ခုပ်သံနှင့်အတူအချို့သော. ဤသူတို့သည်အဘယ်သူမျှဘုရားသခင်အဘို့ကိုခေါ်တုံ့ပြန်မှုများမှာ.
သူကမင်းများနှင့်အာဏာပိုင်များစက်များကို, အရှက်ကွဲဖွင့်လှစ်ရန်သူတို့ကိုထား, ကိုယ်တော်၌သူတို့အပေါ်မှာအောင်ပွဲကိုခံအားဖြင့်. (ကောလောသဲ 2:13-15 တော်မူ၏)
ယရှေုသညျမွကွေီးပျေါမှာသူ့အချိန်ကာလအတွင်းရန်သူဆန့်ကျင်အများအပြားတိုက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့သော်လည်း, မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့အဆုံးစွန်ရှုံးနိမ့်မာကု၏ဧဝံဂေလိတရားကိုရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပျက်. သူကလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအစစ်ဆုပ်. သူကခဏရှုံးခဲ့လျှင်ကြောင့်ထင်ရှားပေါ်ထွန်း. ဒါပေမယ့်သူကအာဏာအားလုံးကိုနှင့်အတူထမြောက်ကြလိမ့်မယ်.
လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယရှေုသညျဤအနတ်ဆိုးတပ်ဖွဲ့များထား, သို့မဟုတ်မင်းများနှင့်အာဏာပိုင်များသည်ပေါလုကောလောသဲ၌သူတို့ကိုခေါ်ဆိုအဖြစ်, အရှက်ကွဲခြင်းကိုဖွင့်လှစ်ရန်. သူကသူတို့ကိုအရှက်. သူကသူတို့ဘယ်လောက်အားနည်းလူတိုင်းကိုပြ. သူကသူတို့ရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖျက်. သူဟာနောက်ဆုံးထိုးနှက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း- ကြိုတင်ပြီး.
အခုတော့သူတို့ရဲ့ပုန်ကန်မှုရှိသမျှတို့ကိုအချည်းနှီးဖြစ်ပါတယ်. နီးပါးသမ္မတနိုင်ငံဝင်ပြိုင်တူ. သည်အခြားယောက်ျားတွေအနိုင်ရနိုင်တယ်လို့လမ်းမရှိသောခဲ့, ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လှည့်ဖြားတလျှောက်တွန်းထားရှိမည်. ဤရွေ့ကားနတျဆိုးသညျဘုရားသခငျဆန့်ကျင်သူပုန်ကိုဆက်လက်, သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြီးသားရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြရတယ်သော်လည်း. သူကရှေးအကတိထားတော်အလုပ်ကိုစတင်ခဲ့. သူပြန်လာကြသောအခါထိုနောက်ဆုံးတော့သူ့ရန်သူများကိုနှိမ်နင်းလိမ့်မည်.
သာနောင်တတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းအားနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာသူ့အလုပ်တုံ့ပြန်ရန်အားဖြင့်ငါတို့သည်အခွင့်အာဏာမှအကြိုးခံစားရပါဘူး, စွမ်းအား, ယေရှု၏အောင်ပွဲ. သူအပေါင်းတို့၏သခင်ဘုရားသည်. သင့်ကိုယ်ပိုင်စိတ်နှလုံးကိုစစ်ကြောသင်တို့သည်ဤသခင်တုံ့ပြန်ပုံကိုကြည့်ရှု.
ဤသူသည်ငါနောက်သို့လိုက်ချင်သောထာဝရဘုရား၏မျိုး. တစ်ကယ်နှုတ်သောသူတဦး, တစ်ဦးကဘုရငျ, တစ်ဦးသခင်, တစ်ဦးအနန္တတန်ခိုးရှင်, တစ်သနားတတ်သောကယ်တင်ရှင်. ဧဝံတစ်ဦးတုန့်ပြန်တောင်းဆိုနေပြီ.
ဒီတနင်္ဂနွေ, မကောင်းသောအကြှနျုပျတို့၏စိတျ၏ရှေ့တန်းမှမှာဖြစ်ဖြစ်ပျက်. မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတစ်ဦးကစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလုပ်ရပ်ကော်လိုရာဒိုအတွက်နေရာယူ. ကျနော်တို့စိတ်မနာစေသင့်ပါ. ကျနော်တို့အမျက်ထွက်ဖြစ်သင့်. သို့သျောကြှနျုပျတို့ဘုရားသခငျသညျအဆုံး၌အောင်မြင်မှုလိမ့်မည်ဖြစ်စေမအံ့ဩခြင်းမသင့်ပါ. နောက်ဆုံးထိုးနှက်လုပ်ကြံခဲ့.
ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာမကောင်းသောအကျော်အောင်ပွဲကိုခံတော်မူပြီ. ကိုယ်တော်မှ Run. ရှေ့တော်၌ Fall. ကိုယ်တော်ကိုကိုးစားကြ. ကိုယ်တော်နောက်သို့လိုက်. ချီးမွမ်းကြလော့. အခြားသူများကိုပြောပြပါ.
KG • သြဂုတ်လ 20, 2013 တွင် 5:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Thank you for what you do Trip!!! ငါ “ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” that new BRAG logo. Could you put it on some apparel or products. Would love to getaT-Shirt with that on. :)
ဖေါ်ပြ: My Article Read (8-19-2013) | My Daily Musing